Mahatsiaro sy manamboatra fihetsika manakorontana
Manana toetra mampiavaka
Kitapo bokotra LOVE hanosika ny bokintsika.
Raha ny marina dia tsy fanambarana mazava izany. Ho an'ny olona rehetra izay mety ho fihetsiketsehana dia mety hahatsapa ho marina izany. Raha mora kivy ianao na mora tohina, dia tsara angamba raha te hianatra ny fomba hanakanana ny fanehoan-kevitrao, ary aza maneho hevitra. Manao dingana iray isaky ny manomboka mahatsiaro fanerena avy amin'ireo bokotra mampihetsi-po ireo ianao.
Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ny bokotra-manosika azy ireo dia mihoatra noho ny anao ---- fa ankehitriny foana (horonan-taratasy mankany amin'ny faran'ity lahatsoratra ity mba hahalalanao raha TSY MAHATAKATRA ITY ianao).
Aoka ianao handray andraikitra fa tsy mamaly
Ny toe-javatra dia mety mitaky valiny, saingy ny famaliana dia tsy mitovy amin'ny hoe manakivy. Ny ray aman-dreny dia manitsy ny zaza ao an-trano miaraka amin'ny "fotoana ifanakalozana" isaky ny tsy misafidy izy ireo na amin'ny fotoana rehetra itoerany fahasahiranana na ny fitantanana ny fihetseham-pony. Toy izany koa, afaka manome fotoana ho anao ianao isaky ny mahatsapa ireo fihetseham-po mihetsiketsika mihetsiketsika ao ambadiky ny fipoahan'ny fahatezerana. Mety mahatsapa tsara ianao amin'izao fotoana izao ... manaisotra ny doro. Saingy, mety mbola hanenina ianao aorian'izay ho very ny hafanao. Ny fihetseham-pon'ny henatra na ny fahasosoran'ny REACTION dia mety hanelingelina anao. Tsara kokoa ny manohitra ny fakam-panahy hihetsika. Misy fomba salama hisarihana ny fahatsapanao.
Manaiky ny fitondrantena mampihetsi-po
Ny fitondrantenan'ny fihetsiketsehana dia tsy azo ovaina raha tsy efa nekena voalohany izy ireo. Mariho hoe inona ny olona (havana, mpiara-miasa, mpifanolo-bodirindrina ary ny hafa) dia mihodinkodina rehefa mipoaka ny fihetseham-ponao.
Ankoatra izany, jereo tsara ny karazana toe-javatra mampahatezitra, mahasosotra, na tezitra. Raha tokony hanameloka ny olona iray na hanome ny herinao amin'ny toe-javatra iray ianao dia miverena ary miezaka ny mijery ny toe-javatra hafa Mitandrema amin'ny toeran'ny mpanohana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mialà eo amin'ny fitoviana. Tsy dia mampihetsi-po loatra ilay mpitsidika, tsy manakenda azy matetika, na dia afaka manandratra ny volomasony aza izy na tsy dia mientanentana loatra amin'ny fanoheran'ny hafa.
Amboary ny fahitana anao
Ny ankamaroan'ny zavatra ataon'ny olona na lazaina dia tsy midika ho fanafihana manokana. Indrisy fa azontsika tsapain-dry zareo fa tokony ho izy ireo. Ny rafozan-janakareo dia tsy naneho ny fiverenan'ny fianakaviana tamin'ny kitapom-bary vita amin'ny alikadia mba hahatonga ny kitapom-bokatra nividianana banana hitanao ratsy. Tsy nanao izany izy! Ary ahoana raha nanao izany izy? De maninona? Aoka ho ilay olona lehibe kokoa, mitsangàna, ary aza mihetsika. Miverena, mialà lalina. Lazao azy ny hafaliany (raha tianao) raha tsy izany dia tsy miteny na inona na inona. Mandritra izany, ankafizo ny fotoana laninao amin'ny fianakavianao. Ny fihaonana dia tsy momba ny sakafo, ary azo antoka fa tsy mila ny tantara ny fianakaviana.
Azo antoka fa hisy ny fotoana ahatsapanao fa tsy afaka ny hangina ianao ary ny zavatra hitanao ho tsy rariny na fitondran-tena iray hafa tokony horesahina. Mazava ho azy, tsy misy olona mangataka anao ho ratra am-paosy ary manodina mandrakariva ny takolaka hafa. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia azonao atao ny manatona ny olona manevateva anao aorian'izay, rehefa avy nandavaka zavatra teo amin'ny lohanao ianao. Aorian'ny hahafantaranao bebe kokoa ny antony mahatonga anao hahatsapa ny fomba ataonao angamba dia manorata fotoana iray hiresahana momba ny fahasamihafanao ao anatin'ny toe-javatra tsy miandany. Raha toa ka tsy mandeha any amin'ny toerana iray ny resadresaka tokana, angamba mpanelanelana na mpiara-miasa iray no mila manatrika.
Tadidio fa teo amin'ny tantara, ny lehilahy manamboninahitra tsirairay dia nanapakevitra fanindroany ho an'ny vahaolana azo atao, mba hiantohana ihany koa fa raha nisy ny duel iray natao, dia natao tamim-pahamarinana sy tamim-pahatsorana izany.
Ny olona tsy mavitrika dia sambatra kokoa. Ankehitriny dia mety ho fanambarana sarotra izany.
Ahoana raha toa ianao rehetra?
Ahoana no ahafantaranao ny fanosehana ny bokinao amin'ny hetsika na fanehoan-kevitra nataon'ireo olon-kafa raha momba anao na momba azy ireny?
Ny olona sasany dia mibaribary momba ny tantara an-tsehatr'izy ireo, ary tsy manitikitika ny hianatra ny tsy hikorontana amin'ny fisehoan-dry zareo. Ny mpanjakavavy Drama dia mitsambikina tsara, afaka mamahana azy ireo ianao na tsia, safidinao izany. Saingy, tsara kokoa ny tsy mividy ny fampisehoana an-tsehatra ary manao azy ireo ho fitafiana manokana. Mitandrema mba tsy ho lasa sponjy haka ny fihetseham-pon'ny hafa. Tsy anjaranao ny mamaha olana tsy anao.
Saingy, aza vonona ny tsy hiraharaha ireo fanehoan-kevitra mahatsikaiky ataon'ny bokotra. Ny fampisehoana tantara an-tsehatra na tsia, ny mombamomba ny bokotra izay mety tsy fantatrao dia manompo anao amin'ny fitaratra. Ny fitaratra dia mpampianatra ara-panahy tsy dia mahalala loatra izay manampy antsika hahita ilay sary lehibe ary hianatra ny momba ny olana manokana atrehintsika.
Fametrahana fifandraisana eo amin'ny mpanjifanao / heilanao
Mialà amin'ny tenanao aloha
Dingana ho fanehoana ny lafarinina idealy anao
Mamela ny fahalalanao
Hanafoana ny adin-tsaina amin'ny reflexology
Animal Totem Gallery: Bibikely Insekte / Arachnids
Mitady fanasitranana ny Empath
Ahoana ny fomba hanatsarana ny tsiratsiraka ao an-trano
Ny tetik'ilay zazavavy ara-panahy amin'ny Dating
Torohevitra ho an'ny fanasitranana lavitra
Ny fototry ny Palmistry
Mandresy ny fironan'ny fahatsapana miray saina
Ny Blaogin'ny Blood ve ny Deoxygenated?
Carmine 'Big Ragoo' Ragusa sy Janet avy amin'ny 'orinasan-tsoavaly telo'
Tree Leaf Keys: Compound Leaves
Inona avy ny toekarena fitondran-tena?
Teny nalaina avy amin'ny 'Cry, The Country's Beloved'
Fampidiran-dresaka amin'ny tahan'ny fitehirizana
Raha tsy miorina mandrakizay ny fianarana any an-trano
Ady sefon'ny Amerikanina: Jeneraly Jeneraly Ambrose Powell Hill
Kakafoka sy 200+ Teny hafa azonao andevozina amin'ny fampiasana fanamarihana mozika
Nahoana ny Grammar Matter?
Mampiasà Pop Rock mba Hanamboatra Volkano (Tsy misy soda na ginea)
Hugh Grant mihira sy mandihy amin'ny alalan'ny "Music and Lyrics"
Mianara momba ireo toetra amam-panahy sy aretina mifandraika amin'ny firaisana
Nahoana no fanitsiana ara-dalàna any Etazonia?
Ny ratsy indrindra hatramin'izay
Tennis Tennis - Ahoana no hilaozana miaraka amin'ny fako fohy
Kivy-toetrandro velona: Clothing
Operation Husky - Fanafihana mitam-piadiana any Sisila
Sary tranainy sy ny profesora
Fampidirana ny teny Japoney Shibaru